Nagarik News - जाडोले प्यारालाइसिस बढायो
05 Feb 2014 | 20:16pm
बुधबार २२ माघ, २०७०
शिवनगरमा अकुपन्चर प्रविधिबाट प्यारालाइसिसको उपचार गराइँदै। तस्बिर : मदन ठाकुर
शरीरले सहन सक्नेभन्दा बढी चिसो भएपछि नसाको रगत जम्ने र जमेको अंग नचल्ने चिकित्सक बताउँछन्
जाडोले हात चल्न छोडेकी टेंग्राहा–४ की ५८ वर्षीया किशुनपतिया देवीको शिवनगरस्थित क्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ। उनलाई प्यारालाइसिस (लकवा) भएको आशंकामा आफन्तले क्लिनिक पुर्‍याएका हुन्। ‘पानी परेजस्तो शीतले जीवन कष्टकर बनाएको छ,' किशुनपतियाकी ३२ वर्षीया छोरी पुनमले भनिन्, ‘चिसोकै कारण आमा बिरामी हुनुभएको छ।'
बाराको पटेर्वा–८ की ४५ वर्षीया चन्द्रावती देवीलाई दायाँ खुट्टा र हात चल्न छोडेपछि शिवनगर ल्याइएको छ। अन्त निको नभएपछि राम्रो उपचार हुने आशमा आफन्तले यहाँ ल्याएका हुन्। एक्युपन्चर प्रविधिमार्फत प्यारालाइसिसको उपचार गरिँदै आएको शिवनगरमा बारा, रौतहट, सर्लाही र भारत सीतामढीका गरी एक दर्जन प्यारालाइसिस बिरामी भर्ना भएका छन्। बेडको कमीले गर्दा भुइँमा राखेर पनि उपचार हुने गरेको बगदह–१ का १६ वर्षीय राजेश यादवले बताए।
जाडोमा बढी प्यारालाइसिस हुने गरेकाले बिरामीको चाप बढेको उपचारमा संलग्न डा. उमेशप्रसाद बताउँछन्। ‘उच्च रक्तचाप हुनेलाई जाडोमा प्यारालाइसिसले आक्रमण गर्ने खतरा रहन्छ,' उनी भन्छन्। दूधे बालकदेखि १० वर्षसम्मका बच्चामा 'फेसियल पारालाइसिस' देखिएको उनी बताउँछन्। यसपटकको जाडोमा मात्र तीन दर्जनभन्दा बढी यस्ता बिरामी उनको क्लिनिकमा आएका छन्।
शरीरले सहन सक्नेभन्दा बढी चिसो भएपछि नसाको रगत जम्ने र जमेको अंग नचल्ने चिकित्सक बताउँछन्। जिल्ला अस्पताल गौरका मेडिकल अधिकृत डा. कौशर आलमले प्यारालाइसिसका बिरामी बढे पनि अस्पतालमा न्युरो फिजिसियनको अभाव रहेकाले प्राथमिक उपचार गरी अन्त पठाइदिने गरेको बताए। ‘यस्ता बिरामीको समयमै उपचार नभए मृत्यु हुने र अंग पछिसम्मै काम नलाग्ने हुन सक्छ,' डा. आलम भन्छन्।